Olee otú idozi android bootloop mgbe wụnye a ROM? | Gosi Top
Na-emekarị mgbe na-egbu maramara ọhụrụ ROM, dị ka Lineage OS, i nwere ike na-ezute a bootloop.
mkpa: Ndabere gị data, dị ka ọ ga-aba ma ọ bụrụ ihe na-aga na-ezighị ezi. Na-egbu maramara ngwaọrụ gị nwere ike imebi ya na-adịgide adịgide, ka ime otú ahụ ga-abụ na gị onwe gị n'ihe ize ndụ
Iji wepu bootloop, hụ iji TWRP.
Buut n'ime TWRP mgbake na-eme ka n'aka na ị nwere ohere na nchekwa site na MTP, bụrụ na ihe na-aga na-ezighị ezi. Gbaa mbọ hụ na a na-arụ ọrụ ROM bụ na mgbọrọgwụ nke data nkebi, maka na-egbu maramara.
Tupu wụnye ROM, na TWRP, họrọ Hichapụ. Nke a ga-Hichapụ Data, cache, na Dalvik (bụghị gụnyere esịtidem nchekwa).
Wụnye gị ROM na reboot, oge a bootloop ga-akwụsị.
Tags: Gam akporo
← Otú imelite TWRP ka ọhụrụ version? Otú ndozi Google Play Services kwụsịrị nsogbu Lineage OS 15.1? →
Olee otú efego nchekwa iji MTP na TWRP iji LeEco Le Max 2 ama ke Windows 10?